सेक्स टोयको प्रयोगले महिलामा चरम आनन्दमा ४ सेकेण्डले वृद्धि हुने!! - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
सेक्स टोयको प्रयोगले महिलामा चरम आनन्दमा ४ सेकेण्डले वृद्धि हुने!!
प्रकाशित मिति : शुक्रबार, अशोज १२, २०७५
यौन/स्वास्थ्य सेक्स टोयको प्रयोगले महिलामा चरम सम्भोग १९.९ सेकेण्डबाट लम्बिएर २३.३ ले अभिब्रिधि हुने नया अनुसन्धानले बताएको छ।
खोज र बिज्ञानका न्यूरोबैज्ञानिकका अनुसार उनीहरुको खोजमा १७ प्रतिसत सोचेको भन्दा बढी नतिजा आएको कुरा ब्यक्त गर्दछन। बिज्ञान र खोजले पत्ता लगाएको उक्त खोजमा महिलामा यौन चाहानामा समेत ब्रिधि हुनुको साथै यौन सम्भोगमा समेत ४ सेकेण्डले बढेको पाइएको छ।
यो खोजका निम्ति १७ महिलालाई हस्तमैथुनको छनोट दिइयो जसमा एउटा टिमलाई हात र अर्को टिमलाई सेक्स टोय र उक्त बिधिलाई दिमागी अवस्थाको जाच गरियो। न्यूरो बिज्ञ निकोलस प्राउस भन्छन-“महिलाहरु जसलाई टोय पप्रयोग गर्न दिइयो उनीहरुले अन्य महिलाको हिसाबमा लामो समय चरम सम्भोगको साथ पाए”! साथै सेक्स टोयको प्रयोगले महिलामा धेरै दबाब राख्नु न पर्ने हुदा उनीहरुका निम्ति हस्तमैथुनको यो तरिका निकै सहज भएको हुन्सक्ने बिज्ञको दाबी रहेको छ।
एउटा महिलाले चरम आनन्द प्राप्त गर्नका निम्ति २६ मिनेटको समय खर्चिन्छिंन भने सेक्स टोय या भाइब्रेटरको प्रयोगले त्यो घटेर ६.५ मिनेटमा रहने हुन्छ। यसको अर्थ महिलाले हातको प्रयोगले भन्दा सेक्स टोयको प्रयोगले उत्तेजित ज्यादा हुने पाइएको छ।
नेपालमा कहाँ पाइन्छ त सेक्स टोय
नेपालमा कृत्रिम यौनाङ्ग (सेक्स टोय) पुरुष र महिला दुवैले गर्छन् । विशेषगरि महिलाको लागि पुरुषको पेनिस र पुरुषको लागि महिलाको भेजिना आवश्यक हुन्छ । पुरुषले प्रयोग गर्ने सेक्स टोयमा २५ सयदेखि २५ हजार सम्मका छन् । त्यसैगरि महिलाले प्रयोग गर्नेलिङ्ग २५ सयदेखि ७५ सय रुपैंयाँ सम्मका छन् ।
खासगरी व्यस्त मानिसहरुका परिवारहरुबीच लामो समय सम्म यौन सम्पर्क हुन पाउँदैन भने लामो समय विदेश गएर बस्नेहरुका श्रीमान श्रीमती पनि यौन समागमबाट टाढा हुन्छन् ।
त्यसैले त्यस्ता मानिसहरुले सेक्स टोयहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । नेपालमा बैदेशिक रोजगारका लागि अधिकांश नेपालीहरु विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा परिवारबीच लामो समय भेट हुँदैन ।
लामो समय एकल बस्नु पर्दा मानिसले अनैतिक सम्बन्ध राख्ने पनि हुन्छन्, त्यसको लागि यस्तासेक्स टोयको प्रयोगले अनैतिक सम्बन्ध राख्नबाट बचाउँने यौनस्वाथ्य सम्बन्धका चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
समाजमा त्यही अनैतिक सम्बन्ध कायम नहोस् भन्नको लागि नै यीसेक्सटोयहरुको उत्पादन भएको होकण्डम हाउसका सञ्चालक न्यौपाने भन्छन्– ‘यसको सहि रुपमा प्रयोग गर्दा यसले कुनै नकारात्मक असर पर्छ जस्तो लाग्दैन् ।
के मुत्र नलीमा संक्रमण भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ ? (जान्नुहोस्)
पुरुषहरुले दैनिक विर्य फाल्नु असर कि फाइदा ? नफाल्दा सेक्स पावर बढ्छ !
यी घरेलु उपाय अपनाउने हो भने जति सेक्स गर्दा पनि गर्भ बस्दैन ! (जान्नुहोस्)
के नियमित हस्तमैथुनले लिंग बांगो हुने हुन्छ !! जान्नुहोस कुरो के रैछ
यौन चाहाना पुरुषलाई बिहान र महिलालाई राति
निद्रामा वीर्य स्खलन किन हुन्छ ? यसले स्वास्थ्यमा असर र सही उपचार बारे जानौं !